जंगलमा बेहोस अवस्थामा भेटिएका सैनिक जवानको मृत्यु !!
Home / समाचार / जंगलमा बेहोस अवस्थामा भेटिएका सैनिक जवानको मृत्यु !!
जंगलमा बेहोस अवस्थामा भेटिएका सैनिक जवानको मृत्यु !! 0
महोत्तरीको जंगलमा अर्धचेत अवस्थामा भेटिएका सैनिक जवानको मृत्यु भएको छ। गौशाला नगरपालिका- ८ भन्टाबारी घर भएका २१ वर्षीय विजय महतोको उपचारको क्रममा आर्मी हस्पिटल छाउनीमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका एसपी कुवेर कडायतले बताए।
गौशाला-८ स्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जंगलमा उनी बेहोस अवस्थामा भेटिएका थिए। सर्लाही जिल्लाको नवलपुरस्थित पाँच कुमारी नेपाली सेना ब्यारेकमा कार्यरत जवान बेहोस अवस्थामा फेला परेका थिए।
मृतक जवानको शव पोष्टमार्टमका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरिक्षक भोला भट्टले बताए।केही बोल्न नसक्ने गरी बेहोस भएका जवान महतोलाई प्रहरीले बर्दिबासस्थित जनसेवा अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपश्चात् थप उपचारका लागि काठमाडौँको छाउनीस्थित नेपाली सेनाको अस्पतालमा पठाएको थियो।
शुक्रबार आफू कार्यरत ब्यारेकबाट दुई दिनको छुट्टीमा घर आएका जवान महतो आइतबार बिहान खाना खाएर ब्यारेक फर्किएका थिए।तर, मंगलबार उनी कार्यरत ब्यारेकबाट जवान महतो घरबाट फिर्ता नआएको भन्दै परिवारजनलाई खबर आएको थियो।
परिवारजनले मंगलबार बेलुका नै इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालामा हिँडिसकेको खबर गरेपछि मंगलबार रातिदेखि जवान महतोको खोजीमा परिवारजन, छिमेकी र प्रहरीसहितको टोली जंगलमा खोज्न गएका थिए।
तर, प्रहरीसहितको टोलीले बुधबार अबेर बेलुका मात्रै जवान महतोलाई गौशाला-८स्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जंगलमा रहेको एक खोल्साको बालुवामा भासिएर बेहोस अवस्थामा फेला पारिएको थियो।
जवान महतोको कसैले कुटपिट गरी हत्या गर्ने प्रयास गरेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। प्रहरीले प्रमाणहरु जुटाएर घटना अनुसन्धान थालेको छ।
ज्यानै लिन सक्ने रोग जन्डिसलाइ यसरी पार्नुहोस निको, यस्ता छन् निको पार्ने अचुक उपायहरु –
इराकः सामुहिक चिहानमा ४ सय शव भेटियो